Ambongadiny PVC mangarahara Granules ho an'ny zaza Kiddy Jelly kiraro mpanamboatra sy mpamatsy | INPVC
Loko: Mangarahara, Semi-Transpraent
Fampiharana: Tsindrona kiraro Kiddy
INPVC dia manolotra karazan-tsolika 100% Virgin PVC marobe ampiasaina amin'ny famokarana kiraro Kiddy Children Jelly Shoes. Ny kiraro mifangaro miaraka amin'ny fanoherana mekanika avo lenta, ny fahombiazan'ny fanodinana, ny fanavaozana ary ny fisehoana ambony. Manome famolavolana namboarina sy manokana arakaraka ny fepetra takiana amin'ny fiantohana ny kalitao sy ny serivisy.
Ny kiraro jelly, izay fantatra amin'ny anarana hoe jellies, dia vita amin'ny PVC tanteraka ary semi-mangarahara miaraka amin'ny famirapiratry ny jelly. Namboarina tanteraka tamin'ny PVC, ireo kapa jelly ireo dia manana fofona buboma mahafinaritra.
famokarana kamban-kiraro mifanentana amin'ny kiraro vita amin'ny kiraro azo alain-tahaka. Ny vokatra natolotra dia takiana amin'ny fampiasana indostrialy kiraro mba hanamboarana sy famolavolana slipy kiddy, kiraro, kapa, baoty ary loafers.
INPVC - ankehitriny dia iray amin'ireo mpanamboatra kiraro Kids Shoes PVC Compound. Ny Compound PVC natolotray anay dia novokarina tao amin'ny trano fonenanay ary misy vita vita tsara, izay miantoka ny fiononan'ny tokana.
Ny masterbatches miloko marevaka dia mahatonga ny kiraro ho an'ny ankizy, kapaoty, kiraro jelly ho manintona ary ny fitambaranay dia manampy ny kiraronao ho maivana sy hahery kokoa. Ny vokatray dia amboarina sy voahodina amin'ny alàlan'ny fametrahana teknolojia mandroso sy milina mifanaraka amin'ny fenitra manara-penitra manerantany.
Miaraka amin'ny vokatra maro karazana hamaly ny fangatahana amin'ny fahatsapany ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny olombelona, ​​dia manamboatra fitaovana vita amin'ny plastika tsy misy fatra sy tsy mitarika plastika fampiasa avo lenta izahay. famaritana hafa izay mety takian'ny mpanjifa.
hakitroky 1.22-1.35 g / cm3
Fampiharana Kiraro ho an'ny ankizy, Jelly zazavavy zazavavy, kiraro PVC malefaka ho an'ny ankizy
Kiraro zazakely amoron-dranomasina, kiraro kristaly fahavaratra ankizy, kiraro kiraro mahazatra
Ny fitambaran-kiraro kiraro PVC dia be mpampiasa amin'ny tsindrona Kiddly Children Jelly Shoes. Granules PVC malefaka sy malefaka miaraka amin'ny fanoherana mekanika avo lenta, tsy misy fofona, fanoherana tsara mivalona dia ampiharina amin'ny kiraron'ny ankizy.
Ny plastika PVC mangarahara sy vita amin'ny kristaly dia azo namboarina ho fotsy, volontany, mavo sy ny sisa.
Miaraka amin'ny traikefa feno amin'ny famokarana PVC, manome famolavolana namboarina sy manokana arakaraka ny filàna azo antoka amin'ny kalitao sy serivisy izahay.
Teo aloha: Kamban-kazo miovaova ho an'ny kiraro biby PET
Manaraka: Fitaovana chloride polyvinyl malefaka ho an'ny tsindrona booty PVC